Ciidamada milateriga kenya oo taba barkooda ay heshiis ku galeen ingiriiska iyo kenya. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home facebook.com Ciidamada milateriga kenya oo taba barkooda ay heshiis ku galeen ingiriiska iyo...
Dowladaha Kenya iyo Biritain ayaa kala Saxiixday maanta heshiis ay Britain ku Tababbarayso millateriga Kenya, iyadoo heshiiskan cusub uu soconayo muddo shan sannadood ah.
Qaar ka mid ah saraakiisha Kenya ayaa sheegay in si taxaddar leh ay u soo dhaweynayaan heshiiskan ay la galeen dowladda UK ee lagu xoojinayo tababarrada la siinayo ciidamada millateriga Kenya.
Sidoo kale, Dowladda Britian ayaa waxay millateriga Kenya ka caawin doontaa qalabeynta ciidanka amniga, iyadoo heshiiskan uu imaanayo iyadoo Kenya ay ka joogaan Soomaaliya kumannaan askari oo qayb ka ah howlgalka ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya.
“Kenya iyo Britain waxay leeyihiin xiriir muddo dheer soo jiray oo labada waddan ay isaga kaashanayaan difaaca iyo amniga, sidoo kalena labada waddan waxaa ka go’an inay arkaan xiriirkooda oo intan ka qoto-dheeraada,” ayuu danjiraha Britain ee jooga Kenya Nic Hailey ku yiri war-saxaafadeed uu soo saaray heshiiska kaddib.
Qodobadan heshiiska waxaa ka mid ah in askarigii lagu soo eedeyo inuu fal-dambiyeed ku kaco inay ka hadli doonaan maxkamadaha UK iyo Kenya, iyadoo maxkamadda ciidamada UK ay u badan tahay inay shaqada ka erido askartii lagu soo eedeeyo dambi, inta muddada heshiiskan lagu gudo-jiro.
Heshiiskaan ayaa waxaa Xukuumadda Kenya ayaa waxaa u saxiixday Wasiiradda Difaaca Kenya, Raychelle Omamo, halka UK uu u saxiixay danjiraha u fadhiya magaalada Nairobi, Nic Hailey.
Ugu dambeyn, Britain ayaa sheegtay in dhaqaalaha tababarka ciidamada Kenya ku baxaya uu gaarayo 9-bilyan oo shillinka Kenya ah, taasoo u dhiganta $88.41-Milyan oo doollarka Mareykanka ah.
Si kastaba ha ahaatee, heshiiskan ayaa waxaa la marin doonaa Baarlamaannada Kenya iyo Ingiriiska si ay u ansixiyaan, iyadoo wasiirrada difaaca Kenya ay ku tilmaantay heshiiskan mid faa’iido badan u leh Kenya.
Previous articleSarkaal u dhashey dalka Mareykanka dhawaana kasoo baxsadey AL-shabaab oo dawlada federalka lagu wareejiyey.
Next articleNin lagu soo eedeeyey in uu galey zino oo dhaq dhaqaaqa AL-shabaab xukun ku fuliyeen.